Xaalad Adag Oo Ka Taagan Darca Iyo Barkac Xoogan Oo Socda. – Bogga Calamada.com
Xaalad Adag Oo Ka Taagan Darca Iyo Barkac Xoogan Oo Socda.
Iyadoo koonfurta Suuriya ay ka soconeyso xamlo dagaaleed ay soo qaadeen malleeshiyaadka Nuseyriyada oo taageero dhanka hawada ah ka helaya diyaaradaha dowladda Ruushka ayaa waxaa sii kordhaya dadka shacabka ah oo guryahooda ka barakacay.
Labadii maalmood ee lasoo dhaafay dadka barakcay waxay tiradoodu gaartay ugu yaraan 160 kun oo qof oo ruux, kuwaas oo u badan caruur, dumar iyo waayeello.
Dadka barakacay waxay gaareen deegaannada xuduud beenaatka Urdun iyo Suuriya, waxaana heysta hoy la’aan iyo cuntada oo aad u liidata, hadiiba la helo.
Wariye ku sugan koonfurta Suuriya oo warbaahinta qaar la hadlay waxa uu sheegay iney jirto baqdin ah in ciidamada Nidaamka ay kusoo taqadumaan deegaannada saxaraha ee ay dadka soo barakacay ku suganyihiin.
Dowladda Urdun ayaa weli diidan iney dadka muslimiinta ah u furto xuduuda, si ay u galaan gudaha dalkaas oo u dhaama saxaraha aan biyaha iyo baadka lahayn ee ay joogaan.
Dadka qaar waxay u barkaceen dhanka Al-jowlaan oo kamid ah deegaannada ku jira gumeysiga Yahuudda, si un ay uga badbaadaan duqeymaha diyaaradaha Ruushka iyo rasaasta malleeshiyaadka Nidaamka.
Dagaallada ayaa weli ka socoda gobolka Darcaa, waxaana maalintii shalay dagaallo dhacay khasaare lagu gaarsiiyay malleeshiyaadka Nidaamka, iyadoo laga gubay illaa afar gaari oo noocyada gaashaman ah.
Dhanka kale waxaa fashilmay wadahadallo dhexmaray kooxaha mucaaradka kacdoon wadayaasha ku sugan koonfurta Suuriya iyo dowladda Ruushka, wadahadalladaas oo lagu doonayay in lagu qaboojiyo dagaallada socoda.
Saraakiil u hadlay Mucaaradka waxay ku baaqeen in Ruushku joojiyo gumaadka uu ku hayo shacabka Koonfurta Suuriya degan.
Ruushka iyo Nidaamka ayaa isticmaalaya siyaasad qurun ah oo dhagar badan, taas oo ah in marba uu meel xooga saaro, sida uu horeyba ugu sameeyay Quudhada bari, iyo Xalab.